Baarlamaanka UK oo u codeeyey in dib loo dhigo Ka-bixitaanka EU-da (Brexit) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Baarlamaanka UK oo u codeeyey in dib loo dhigo Ka-bixitaanka EU-da (Brexit)
Baarlamaanka UK oo u codeeyey in dib loo dhigo Ka-bixitaanka EU-da (Brexit)
March 14, 2019 - By: Hanad Askar
Baarlamaanka UK ayaa maanta oo khamiis ah u codeeyey in muddo sadex bilood ah dib loo dhigo qorshaha uu dalkaasi uga baxayo Midowga Yurub.
Xildhibaano gaaraya 412 ayaa u codeeyey mooshinkan dib loogu dhigayo Brexit halka ay diideen 202 xildhibaan. Mooshinkan ayaa qorayey in dib loo dhigo ka bixitaanka EU-da illaa 30ka bisha June ee sanadkan.
Mooshinkan ayaa yimid kadib markii ay habeenimadii Salaasadii lasoo dhaafay Baarlamaanka Ingiriiska uu cod aqlabiyad ah ku diiday qorshaha ay soo diyaarisay Raysalwasaare Theresa May iyo habka lagu maareenayo Brexit ee heshiiska UK iyo EU-da.
Theresa May ayaa lagu wadaa in asbuuca soo socda markii sadexaad horgeyso baarlamaanka qorshaha ka bixitaanka, balse Baarlamaanka ayaa horey labo goor u diiday qodobada heshiiskaas qaarkood.
29ka bishan Maarso ayaa ah xiliga loo qabtay dowlada UK inay isaga baxdo Midowga Yurub, balse kahor waa inay heshiis dhameystiran la gaarto dalalka EU-da, heshiiskaasi oo la xariira qaabka loo maareyn doono ganacsiga ka dhaxeeya labada dhinac iyo maamulida xadka u dhaxeeya UK iyo dalalka weli xubnaha ka ah Midowga Yurub.